Spotify desktọọpụ version Nwela emelitere na ọhụrụ imewe na ndị ọzọ | Gam akporosis
Spotify dị nnọọ mara ọkwa mmeghari ohuru nke desktọọpụ ngwa na a ọhụrụ imewe na usoro ohuru maka ndi debanyere aha ha, ha gha aghaghi igha ha uru ha.
Emeputara ohuru ohuru a iji mee ka ihe ndi okacha amara nke ndi ocha choputara na ntughari obi ya njikwa ka mma n'ịmepụta listi ọkpụkpọ ma ọ bụ listi ọkpụkpọ.
1 A ọhụrụ interface maka desktọọpụ ngwa
2 Ihe ohuru a: mepụta ndetuta ọkpụkpọ na ngwa ngwa na Spotify
3 Maka ndị debanyere aha ego: nchekwa bandwit
A ọhụrụ interface maka desktọọpụ ngwa
Nke a Spotify update na-abịa na desktọọpụ version nke music gụgharia ọrụ na ebumnuche nke na ahụmịhe na-ege ntị bụ ihe kachasị mma na nghọta. Nke ahụ bụ, anyị na-etinye ngwa gam akporo maka ugbu a iji lekwasị anya na nke anyị nwere ike ịnweta na PC ma ọ bụ laptọọpụ anyị.
Mmelite nke ahụ, dị ka Spotify n'onwe ya na-ekwu, abịarutela ọnwa ole na ole nke nyocha nke ikpo okwu anatala nzaghachi n'aka ndị ọrụ. Anyị nwere ike ikwu na nrụzigharị a raara nye ihe nhicha nhicha ma nwee njikwa dị ukwuu.
Ọ bụ eziokwu na amaara m ha agbanweela ụfọdụ ọnọdụ nke ọnọdụ dịka o si eme onye na-achọ na nke ahụ dị ugbu a n'akụkụ aka ekpe nke ibe igodo. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ihe a na-achọ bụ ka onye ọrụ nwee ike ịchọ ọdịnaya ha chọrọ ngwa ngwa.
Akwụkwọ akụkọ abụọ ọzọ bụ desktọọpụ nke onye ọrụ ọ bụla na nke ahụ ugbu a gụnyere ọkacha mmasị gị na-ese ihe na abụ, na nke abụọ, ikike igwu egwu redio nke abụ ma ọ bụ onye na-ese ihe nanị site na ịpị bọtịnụ "..." na menu.
Ihe ohuru a: mepụta ndetuta ọkpụkpọ na ngwa ngwa na Spotify
Wezụga mgbanwe imewe mere ka ọ Cleaner, ahụmahụ nke ihe e kere eke na njikwa, ka anyị nwee ike ịchịkwa ha.
N'ime ndị ahụ ikike anyị ga-enwerịrị:
Gụnye nkọwa na ndetuta ọkpụkpọ
Dezie abụ ndị ahụ dị
Tinye ọdịnaya ọhụrụ maka oghere nchọta ọhụụ
Maka ndị ọrụ na-emepụtaghachi ha, ha ga-ahụta dị ka ihe ọhụụ ike dezie play kwụ n'ahịrị na-ele songs nke a gee ntị na nso nso a na ngwa desktọọpụ. Nhọrọ ndị ọzọ ga-abụ ikike ịtụ ọba akwụkwọ site na nchịkọta nhọrọ adaala ọhụrụ ị ga-ahụ dị na akuku aka nri aka nri.
Echere m, ihe anyị ga-enwe ike ịchịkwa usoro ịge ntị ka anyị mee ọkacha mmasị anyị listi ọkpụkpọ na Spotify.
Maka ndị debanyere aha ego: nchekwa bandwit
Ihe omuma ohuru nke Spotify bu ikike nke ndi debanyere aha ha budata ọkacha mmasị gị egwu na pọdkastị maka playback na-anọghị n'ịntanetị. Site na desktọọpụ ngwa anyị nwere ike ịchọta bọtịnụ nbudata iji nwee egwu anyị na-anọghị n'ịntanetị.
Agbakwunyerela ụzọ mkpirisi keyboard na ị nwere ike ịchọpụta mgbe emelitere ngwa ahụ site na ụzọ mkpirisi Control +?.
Nke a ohuru Spotify amalitela imeghari nke mere na ọ ga-erute ndị ọrụ niile n'ụwa na izu ndị na-abịanụ ka anyị wee nwee ike ịma ihu ọhụụ dị mma yana ozi ndị ahụ niile metụtara listi ọkpụkpọ na ọnọdụ offline nke ụdị desktọọpụ. Ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka egwu, echefula ya kacha ege ntị na ndị na-ese ihe n'afọ 2020.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Spotify na-eme ka ngwa desktọọpụ ọhụrụ dị ọhụrụ site na imepụta ọhụụ na arụmọrụ ọhụrụ
Ngwa ịbanye maka ọrụ n'efu